उप्रधानमन्त्री यादवको लापरबाहीले यात्रुलाई सास्ती ! | जनदिशा
उप्रधानमन्त्री यादवको लापरबाहीले यात्रुलाई सास्ती !
उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले लापरबाहीले थाई एयरलाईसन्का कर्मचारी र विमानका यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ ।
थाईल्यान्ड जान लागेका उनी मंगलबार अन्तिम समयमा एयरपोर्ट पुगेका थिए ।
उनी थाई एयरवेजको विमान उडान भर्न ढोका बन्द भईसकेपछि बल्ल एयरपोर्ट पुगेका थिए ।
थाई एयरलाइन्सका कर्मचारीका अनुसार मन्त्री यादवलाई पर्खदा एयरलाईसन्को उडान झन्डै ४५ मिनेट ढिलो भएको थियो ।, आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।
Previous Previous post: भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाइयो, मन्त्रालयको संख्या कति पुग्यो ?
Next Next post: दुर्गा प्रसाईँलाई कारवाही गर्न नेविसंघको माग